१७ बर्षकै उमेरमा बुवा जितेन्द्रको त्यो एक नमिठो शब्दले एकता कपुरले गरिनन् विवाह – Kavrepati
Home / समाचार / १७ बर्षकै उमेरमा बुवा जितेन्द्रको त्यो एक नमिठो शब्दले एकता कपुरले गरिनन् विवाह
१७ बर्षकै उमेरमा बुवा जितेन्द्रको त्यो एक नमिठो शब्दले एकता कपुरले गरिनन् विवाह
admin June 12, 2021	समाचार Leaveacomment 222 Views
काठमाडौं । बलिउडमा ‘टिभी क्वीन’ अर्थात टेलिभिजनकी राजकुमारी भनेर परिचित एकता कपूर संसारभर परिचित छन् । अभिनेता जीतेन्द्र र शोभा कपूरकी छोरी एकताले धारावाहिकबाट बलिउडमा धेरै नाम कमाउन सफल भएकी छिन् । एकता एक सफल निर्देशक, लेखक र निर्माता हुन् । एकता उनकी आमा शोभा कपूरकी प्यारी छोरी हुन् । एकता र शोभा कपूर बालाजी टेलिफिल्म्समा साझेदार छन् ।
त्यतिखेर, बुबाबाट आर्थिक सहयोग पाएपछि एकताले टिभी धारावाहिक निर्माण गर्न थालिन् । एकताले १९ वर्षको उमेरमा आफ्नो क्यारियर शुरू गरेकी थिइन् । एकता कपूरलाई धेरै कलाकारहरू भगवानको रुपमा लिन्छन् । उनले भर्खर बलिउडमा प्रवेश गर्न खोजेकाहरुलाई आफ्नो धारावाहिकमा लिएर चर्चित बनाउने गर्छिन् ।
एकताले विद्या बालनदेखि स्व. सुशांत सिंह राजपूतलाई आफ्नो धारावाहिकमा अवसर दिएकी थिइन् । आज उनका धारावाहिकमा काम गरेका धेरै अभिनेता–अभिनेत्रीहरू बलिउडमा नाम कमाउँदैछन् । आजका दिनमा टिभीका सबैभन्दा महँगा कलाकार राम कपूर पनि एकता कपूरको धारावाहिकमा सहभागी भएर वास्तविक पहिचान बनाउन सफल भएका हुन् ।
एकताले आमा शोभा कपूरसँगै सबै व्यवसाय सम्हाल्छिन् । एकताले अहिलेसम्म करीव ४० धारावाहिक बनाइसकेका छन । तपाईंलाई जानकारी नहुन सक्छ कि एकताले बलिउडमा ‘क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता’ बाट डेब्यु गरेकी थिइन् ।
एकता कपूरले उनको भाई अभिनेता तुषारलाई लिएर पनि धेरै फिल्म बनाइसकेकी छिन् । तर तुषार भन्दा बढी एकताले बलिउडमा नाम कमाएकी छन । एकता कपूरको प्रायः चलचित्र वा धारावाहिक बोल्ड दृश्यले भरिएका हुन्छन् । तर मानिसहरूले उनका शोहरू मन पराउँछन् ।
एकता कपूरलाई उनको सफलताको लागि भारतीय टेलिभिजन एकेडेमी पुरस्कार, भारतीय टेली पुरस्कार, कलाकार पुरस्कार, एशियाली टेलिभिजन पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ । व्यवसायीक जीवनमा थुप्रै धमाका मच्चाएकी उनी, अझै कुमारी छिन् । एकताले यसबारे कुरा गर्दा एक पटक आफ्ना बुवाले गर्दा आफुले विहे गर्न नसकेको भनेकी थिइन् । एकताले आफ्ना बुबाको एक सर्तका कारण अहिलेसम्म बिहे नगरेको बताइन् । नत्र उनी २२ वर्षको उमेरमा घरबार बसाउन चाहन्थिन् ।
बिहेको प्रश्नमा एकता कपूरले भनेकी थिइन्, ‘जब म १७ वर्षकी थिएँ, तब मेरो बुबाले भन्नुभएको थियो कि विवाह गर वा पार्टी (मोज, मस्ति) गर्नुको सट्टा काम गर, जस्तो कि म चाहन्छु । बुवाले मलाई पकेटखर्च पैसा बाहेक अरू केही नदिने भन्नुभयो । त्यसपछि पैसा कमाउनको लागि, मैले एउटा विज्ञापन एजेन्सीमा काम गर्न शुरू गरें ।’
Next यो कस्तो प्रेम ! १२५ पटक फोन गर्दा प्रेमीले नउठाएपछि सधैको लागि बिदा भइन प्रेमिका (भिडियो सहित)